NgoJulayi 2021-Funda ukuRhweba
Inyanga: July 2021
I-USOIL (i-WTI) inokuthi yehle njengoko ifikelela kuMmandla oThengisiweyo ongaphezulu kweNqanaba 74.21
USOIL ulungisa phezulu. Ifikelele kwi-74.21 ephezulu yeedola. Ikwafikelele ekudinisweni okuphezulu. I-oyile ekrwada ye-WTI kulindeleke ukuba iwe. Okwangoku, nge-8 kaJulayi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kuwela kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-60.90.
I-USOIL (i-WTI) ikwinqanaba lama-56 le-Index ye-Relative Strength period 14. Ibonisa ukuba i-WTI ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Imivalo yamaxabiso ingaphezulu kwee-SMA ezibonisa ukuba intengiso iya kunyuka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso le-WTI lilungisa ngaphezulu. Ukulungiswa okuphezulu kujongene nokumelana kwinqanaba le-74.00 njengoko imarike iyehla. Ixabiso le-WTI kulindeleke ukuba lihle njengoko belirhweba kwingingqi ethengwe kakhulu ukusukela ngoJulayi 21. Ngeli xesha, nge-8 kaJulayi ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-USOIL iya kuwela kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-60.90.
I-USOIL ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. USOIL ifikelele kummandla othengiweyo ongaphaya kwemarike. Ixabiso le-WTI kusenokwenzeka ukuba liwe njengoko abathengisi bevela kwindawo ethe kratya yentengiso. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMAs zihamba phezulu.
Ixabiso le-USOIL (WTI) liphelile ngokulungiswa okuphezulu njengoko imarike iqala phantsi. Imarike ifikelele kummandla othengwe ngaphezulu. Kukho amathuba okuba amaxabiso aqhubeke nentshukumo esezantsi. Ngokwesixhobo seFibonacci, i-USOIL iya kuwa kwinqanaba le-2.618 yolwandiso lweFibonacci okanye inqanaba leedola ezingama-60.90.
I-GBP / JPY iqala kwakhona ngeDowntrend emva kokuNqatshwa kwinqanaba le-153.50
Amanqanaba okuGxila aphambili150.000, 152.000, 154.000
Amanqanaba enkxaso aphambili: 146.000, 144.000, 142.000
I-GBP / i-JPY yeXabiso leXesha elide: Ukuthwala
Namhlanje, i Isibini se-GBP / JPY ukuwa emva kokujongana nokwaliwa kwinqanaba le-152.00. Ukusukela nge-10 kaMeyi, intengiso iye yehla ngokuthe ngcembe kwicala elisezantsi. Ixabiso lemali liphule ngezantsi komndilili wokuhambisa okhawuleze uxinzelelo lokuthengisa. Okwangoku, nge-21 kaJuni ezantsi; Umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyisela kwakhona i-38.2%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba iphawundi iya kuwela kwinqanaba 2.618 ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-143.62.
I-GBP / JPY-Itshathi yemihla ngemihla
Esi sibini sikwinqanaba lama-50 leSalathiso saMandla aMandla aNxulumene noko. Oku kubonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-14 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMAs zihlehla ezantsi. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kwee-SMAs ezibonisa ukuhla okungaphezulu.
I-GBP / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Ukuthwala
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sihamba phantsi. Isibini siyawa njengoko sijongana nokwaliwa kwinqanaba le-153.50. Esi sibini sihambe ecaleni.
Isibini semali singaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isibini sikwimeko ye-bearish. Iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zee-SMA zijike ngokuthe tyaba zibonisa imeko esecaleni
Isibini se-GBP / JPY sisezantsi kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, intengiso kulindeleke ukuba yehle kwinqanaba le-145.62. Nangona kunjalo, yawela kwinqanaba le-148.45 kwaye yabuya umva. Esi sibini ngoku siqala kwakhona ngokuhla okutsha
Iirekhodi zeBitcoin ezinkulu zoTshintshiselwano ngeeCrypto
Ngokwedatha entsha evela kwi-on-chain analytics platform yeGlassnode, Bitcoin Iibhalansi zotshintshiselwano ziye zehla zaya kumanqanaba asezantsi ukusukela kwimarike ye-bearish ngasekupheleni kuka-2018.
Ingxelo entsha evela kumhlalutyi wentengiso uWill Clemente ibonisa ukuba ukuphuma okukhulu okukhulu kwenzeka kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo. Uye waphawula ukuba:
"Ukuphuma kabini okukhulu namhlanje: enye ixabisa i-23,530 BTC ngale ntsasa kwaye enye ibhetshi ixabisa i-40,181 BTC malunga nesiqingatha seyure eyadlulayo."
Ukuphuma kwe-BTC ukusuka kutshintshiselwano lwe-imali yedatha esembindini kubonisa ngokuthe gca uluvo lwe-cryptocurrency. Oko kuthetha ukuba iiasethi zinokufuduswa zigcinwe kubanda ngokulindela irali yamaxabiso.
Kwangokunjalo, xa kukho ukungena okuphawuleka kunaniselwano nge-crypto, kubonisa umbono we-bearish kwintengiso njengoko abatyali-mali belungiselela ukupheliswa.
Ngo-Epreli nango-Meyi, intengiso irekhodishe ukuhanjiswa kwe-BTC ngobuninzi kutshintshiselwano, okubuyise imeko yonyaka. I-Bitcoin inyuke nge-64,800 yeedola ngo-Epreli kwaye ishiyeke isezantsi. Oko kwathethi, ukurhoxa okuqhubekayo kwe-BTC kutshintshiselwano kubonisa ukuba imeko esezantsi inokuba iphelile.
I-Bitcoin ibona imisebenzi emikhulu yeminenga kule veki
Kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, ibhloko ye-blockchain kunye ne-transaction enkulu ye-analytics iqonga le-Whale Alert liqwalasele malunga ne-50 yentengiselwano iyonke eyi-456k BTC exabisa i-18.5 yezigidigidi zeedola kumaxabiso entengiso akhoyo. Iqonga liqaphele ngoLwesithathu ukuba:
"I-9,977 #BTC (399,349,419 yeedola) idluliselwe kwisipaji esingaziwayo saya kwisipaji esingaziwayo."
Okwangoku, i-Bybt kunye ne-CryptoQuant ityhile ukuba imakethi ibhale ukugqogqa okuphezulu kosuku olunye lwemali kunyaka ophelileyo kule veki, nge-57k BTC ishiya ukutshintshiselana nge-crypto phantsi kweeyure ezingama-24.
Ngelixa kungacacanga ukuba zeziphi izinto ezinazo ezi dilesi ze-whale okanye apho ii-asethi ze-crypto zihanjiselwa khona, akukho nto inokuphika ukuba iBitcoin ishiya ngokukhawuleza ukutshintshiselana.
tags Bitcoin, BTC, Cryptocurrency, iindaba
IPolkadot (DOT) iqala kwakhona kwi-Uptrend, ilwa neNkcaso kwi-15.24 yeedola
namhlanje, IPolkadot's (DOT) ibuyela emva kokujongana nokwaliwa kwi-15.60 yeedola. I-crypto iwele kwi-14.40 yeedola esezantsi kwaye iphinde yaqala ukuya phezulu. Ukusukela nge-26 kaJulayi, iPolkadot ijongene nokwaliwa kwi-15.24 yeedola. Kwicala elingaphezulu, ukuba abathengi baphula i-15.24 ephezulu yeedola, intengiso iya kunyuka iye kwi-17 yeedola ephezulu. Kwelinye icala, ukuba i-DOT / USD ijongene nokwaliwa, ixabiso le-DOT liza kuqhubeka nokuhla phakathi kwe- $ 13 kunye ne- $ 15.24.
IPolkadot ikwinqanaba lama-50 leSalathiso saMandla esiNxulumene naMandla ixesha le-14. Ibonisa ukuba kukho ulungelelwaniso phakathi konikezelo kunye nemfuno. Iintsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka emazantsi zibonisa ukuhla. Imivalo yamaxabiso ingaphantsi kwemilinganiselo ehambayo ephakamisa ukuhla okungaphezulu.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-altcoin yenza uptrend. I-uptrend ijongene nokwaliwa njengoko amaxabiso awile ngaphezulu kweNkxaso yeentsuku ezingama-21. Olu hlaselo luza kuqhubeka ukuba inkxaso ye-SMA yeentsuku ezingama-21 ibanjiwe. ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-21% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba ixabiso le-DOT liza kunyuka liye kwinqanaba le-50 Fibonacci extensions okanye kwinqanaba le- $ 2.0.
I-crypto ingaphantsi kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba i-altcoin ikwi-bearish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. I-altcoin ine-crossover ye-bullish njengoko iintsuku ezingama-21 ze-SMA ziwela ngaphaya kwe-50-day SMA. Oku kubonisa umqondiso wokuthenga.
I-DOT / i-USD isathengisa kwindawo ye-bearish. Okwangoku, i-crypto iqale kwakhona ngokunyuka okuphezulu. Ukuhambela phezulu kujongene nokwaliwa kwi-SMA yeentsuku ezingama-50. Ukuba amaxabiso aqhekeza ngaphezulu kweentsuku ezingama-50 ze-SMA, i-crypto iya kuba kwindawo yokuqhubela phambili.
Phawula: LUmvuzo2Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo mali
Iindibano zegolide ukuya kwiindawo eziphakamileyo zenyanga emva kosuku lwe-FOMC
Inkxaso ephambili: 1825
Ukuchasana okuphambili: 1833 - 1850
Igolide inyusa kakhulu. Kudala ndithetha oku iinyanga. Uthango oluchasene nokunyuka kwamaxabiso sisi sinyithi kwaye nangona isenzo sexabiso siye sangoku sigungqa KAKHULU kwaye sinamaxesha amaninzi; ixesha elide ulwakhiwo olwenziwayo luyadlala.
NgoLwesithathu, iGolide yabona ukuphela kosuku ukungena kokuthenga ivolumu emva kwenkomfa yoSihlalo uPowell apho wayejolise khona kukunyuka kwamaxabiso okwangoku nakwikamva kwaye iFed igcina isantya salo mjikelo weQE ukuqhubeka nokukhulisa uqoqosho. esisengumbandezelo kubhubhane (kunye nokunyuka okwangoku kwimeko) ukucima. I-Fed yayinokhetho ezi-2, ukulwa nokunyuka kwamaxabiso ngoku kunye nokunyuka kwamaxabiso kunye nokuqala ukunciphisa inkqubo yokuthenga iiasethi okanye ukuqhubeka nokukhulisa uqoqosho ngenkqubo yokunyuka kwamaxabiso. Bakhetha eyokugqibela.
Oku kwakuxhaswa kakhulu kwiGolide. Sibonile i-rally eyi-2.25% ukusuka ngoLwesithathu ukuya kumazantsi aphezulu. Inqanaba lokubamba umda we-id kwi-Gold kule nyanga iphakamileyo (1833). Ixabiso lokugqibela lokurhweba kweli nqanaba iGolide lifakwe kwi-2.5% kwithuba elide kakhulu (inyanga enye ubude) ukubuyela umva kwe-ABC.
Urhwebo lwanamhlanje lukhefu olulula lokuphakama kwenyanga kuluhlu oluxineneyo lwemihla ngemihla.
I-GBPUSD eyaphula i-1.3980: Ithenga umdlalo
Inkxaso ephambili: 1.3940
Ukuchasana okuphambili: 1.3980 - 1.4080
I-GBPUSD iqokelele i-3% (i-407 pips) ukusuka kwiveki ephelileyo ejikeleze inqanaba le-1.3560. Eli nqanaba / isitshixo senqanaba kulapho sabona abathengi bengena ekuqaleni kukaFebruwari ukutyhala amaxabiso anyuke malunga ne-5.07% (687 pips) ukuvavanya inqanaba elikhulu le-1.42.
Kwiveki ephelile. abathengi baphinde bangena kwakhona kweli nqanaba linye kwaye ngoku amaxabiso athengiswa ngaphakathi kweyona ntshukumo ifanelekileyo.
asikaboni nasiphi na isitshixo esinzulu kule ntshukumo ebonisa ukuba, nge-USD dipping, iPound eyomeleleyo. Ukutsala okunzulu kakhulu yayingu-0.59% kuphela.
Okwangoku, i-GBP ephezulu ibekwa kwinqanaba le-1.3980 (izolo kunye namanqanaba aphezulu wanamhlanje) ngelixa kusenziwa imigangatho ephezulu. Olu rhwebo luqhutywa ngakumbi yi-USD ngengqondo yokuba sijonge kwelinye icala emva kwekhefu lokutshintsha kunye nengqungquthela yeendaba ye-dovish izolo evela kuSihlalo uPowell. Umxholo ophambili ibikukunyuka kwamaxabiso kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukungafakwanga inkqubo yokuthenga iiasethi ngoku.
Yonke le nto ifana ne-bearish njengoko ifumana i-USD.
Ukuthenga kwethu kumisa kwiPawundi-kuthi i-Dola kujoliswe kwikhefu lwanamhlanje kwi-USD iza umthamo weentengiso zangaphambili.
Ukuphuma kwe-AUD / JPY kuzisa ukuQhubeka!
I-AUD / JPY yehle kancinci kwixesha elifutshane, kodwa uxinzelelo oluphezulu lomelele. Indawo yenkxaso ibambe, ke ukuphuka okuphezulu kuyathandwa. Ngexesha elifutshane, isibini siyehla njengoko i-Yen yanyuswa kukuthengiswa kukaNikkei.
I-AUD / JPY inyuka ngoku nokuba iJapan yokungaSebenzi, iMveliso yokuQala yokuSebenza, kunye nokuQalwa kweZindlu kungene ngcono kunokuba bekulindelwe. Ngelishwa, ukuThengiswa kweNtengiso kunyuke kuphela nge-0.1% ngoJuni xa kuthelekiswa ne-0.3% kulindeleke kwaye emva kokukhula kwe-8,3% ngoMeyi.
AUD / JPY H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-AUD / JPY ibalekile kwipatheni yokuwa komtshato ebonisa intshukumo ephezulu. Ifumene ukunganyangeki okwethutyana kumgca ophakathi wefolokhwe (ml) kwaye ngoku yenqabile kancinci.
Ifumene inkxaso engezantsi kwepivot point yeveki (80.956), kanye kumgca oshukumayo wangaphakathi (sl). Ngokobuchwephesha, ibanjiwe ngaphakathi kwejelo elisezantsi, ukuphuma okuphezulu kunokuqinisekisa ukukhula ngakumbi, umlenze omtsha uphezulu.
Ukuzinzisa ngaphezulu kwenqaku le-pivot yeveki (80.956) elandelwa kukuqhawuka okufanelekileyo ngokusebenzisa umgca we-downtrend kunokuqinisekisa ukuba ujingi omtsha uphezulu.
tags AUDJPY, Forex Analysis Technical, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo
I-USDCAD: I-CAD yaseCanada iyomeleza, iDollar ithambisa njenge-US GDP Falters
I-USDCAD: Idatha yakutshanje yengqesho evela eCanada ibonise ukuba ingqesho inyuke ngama-231,000 (+1.2 yeepesenti) ngoJuni, kulandela ukuwa kweenyanga ezimbini ezingama-275,000. Umsebenzi wesingxungxo ubonakalise konke ukukhula kwemisebenzi, obekugxilwe kulutsha oluneminyaka eli-15 ukuya kwengama-24. Izinga lokungabikho kwemisebenzi ibiyi-7.8%, ngokuhla ngama-61,000 kwinani labantu baseCanada abangasebenziyo (-3.7 pesenti). Inani labantu abasebenzayo, nokuba baqeshiwe okanye abaphangeli, likhule ngabantu abayi-170,000 (+ 0.8%). Izinga lokuthabatha inxaxheba kwezabasebenzi lenyuke ngama-0.6 eepesenti ukuya kwiipesenti ezingama-65.2. Ngenxa yoko, kukho imiqondiso ekhuthazayo yokuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo kuya kuqhubeka njengoko izithintelo ze-COVID-19 zinokuphakanyiswa.
NgoLwesihlanu, isibini se-USDCAD sandise ukulahla kosuku oludlulileyo kwaye sabona ukuthengisa okunzima kusuku lwesithathu ngokulandelelana. Ukuhla kwesibini, okusizisele ngaphezulu kweeveki ezimbini, kwaqhutywa zizizathu ezininzi. Idola yaseMelika iphinde yajongwa phantsi luphuculo oluncinci kwiimvakalelo zomngcipheko wehlabathi kunye nokudakumba kwedatha enkulu yaseMelika, kunye Usihlalo weFed uJerome Powell iingxelo ezimnandi ngoLwesithathu. UPowell wagxininisa ngexesha lenkomfa yeendaba emva kwentlanganiso ukuba kwakusekude ukuba benze inkqubela phambili ebonakalayo kwimisebenzi. UPowell naye wayemathidala malunga nokuthinta, esithi ingathatha iintlanganiso ezimbalwa ngaphambi kokuba iphunyezwe.
Idatha yase-US yayidanisile kwaye ezona mali ziphambili zatsiba idola kwaye zathumela ezantsi ngokubanzi. I-GDP ePhambili kwikota yesibini ikhule nge-6.5%. Oku kunyuka okubukhali, kodwa kuncinci kunengqikelelo yesivumelwano ye-8.5%. Ukufunda ngokuthambileyo kunokuba ngenxa yokwehla kwee-inventri, ekungalindelekanga ukuba ibe yinkxalabo enkulu. Amabango angenamsebenzi nawo asilele kwimvumelwano njengoko amabango okuqala kunye nokuqhubekayo ayephakame kancinci kunokuba bekulindelwe.
I-Dola ibuthathaka emva kwe-Selloff, i-USDCAD yatsala ezantsi
Ngokuhlwa, idola lafumana olunye ujikelezo lokuthengisa kwaye ngoku lithengisa kwinqanaba eliphantsi. Ukuthintela umngcipheko akuncedi nganto kwidola. Nangona kunjalo, iimali zorhwebo, ngakumbi iidola zaseOstreliya naseNew Zealand, zilandela kufutshane njengabadlali abaqhuba kakubi kule veki. Izidwangube zaseYurophu, zikhokelwa nguSterling, zibonakala ngathi ngabaphumeleleyo ngokucacileyo kule veki. Nangona kunjalo, ngaphambi kwempelaveki, ukubulawa kwezibalo ze-GDP ezivela kwi-Eurozone naseCanada kunokuwutshintsha umfanekiso.
Ukuwa kokuxhathisa kwe-1.2485 kwajika inkxaso kwi-USDCAD iphakamisa ukuba ukonyuka ukusuka kwi-1.2005 kusenokwenzeka ukuba sele kugqityiwe kwi-1.2805. Umkhwa we-intraday okwangoku ungumbane, kunye nenkxaso yeqela elilandelayo kwi-1.2301. (Ukubuyiselwa kwakhona kweepesenti ezingama-61.8 kwe-1.2005 ukuya ku-1.2805 kwi-1.2311). Kwimeko yokubuyela kwimeko yesiqhelo, umngcipheko uya kuhlala umncinci ukuya kwicala eliphantsi ukuba kude kube li-1.2605 ukumelana nokuhlala.
Naluphi na ukonyuka okunyukayo, kwelinye icala, kubonakala ngathi kudibene nokuxhathisa okunzima kufutshane nenqanaba le-1.2500 yengqondo. Indawo ethe tyaba yokuqhekeka, ngoku ejikayo ukuxhathisa kwingingqi ye-1.2525-30, iyahambelana nepesenti ye-38.2 yeFibo. inqanaba kwaye ilandelwa ngokusondeleyo yindawo ethe tyaba yokuqhekeka, ngoku yajika inkcaso kufutshane nommandla we-1.2525-30. Ukuhamba okungagungqiyo ngaphaya kwe-1.2600 confluence kunokunceda esi sibini ekwenzeni inzame entsha yokucela umngeni.
tags ICAD yaseCanada, USDCAD
Ukugcinwa kwe-EURJPY kufutshane neXesha eliThambileyo ukuya kwi-131.00 kwiDatha ye-EU elindelekileyo
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EURJPY-Julayi 30
Ngexesha leyure zokuqala zokurhweba zaseYurophu ngoLwesihlanu, i-EURJPY yenyuka ngandlela ithile. Esi sibini siqhubekile senyuka ukusuka nge-20 kaJulayi ngokuya ngoku kwaye sisendleleni yokufikelela kwinqanaba le-130.50. Nangona inkqubela phambili ye-Euro inyanzeliswa yi Umbono weECB kunye neenkcukacha zoqoqosho ezilindelekileyo.
Amanqanaba okumelana: 132.70, 132.00, 131.00
Amanqanaba enkxaso: 129.61, 128.58, 127.50
I-EURJPY igcina ngokuthe ngcembe imeko yokufikelela kwinqanaba le-131.01, esi sibini sigcina ukunyuka kwaso okungasemantla. Okwangoku ithengisa kwindawo ephezulu ye-130.32, inyuke nge-0.08 yepesenti enegumbi elingaphezulu, kunye nekhefu elingaphezulu kwendawo yokumelana ne-130.50 iya kuyisa kwi-131.00, isithintelo sexesha elikufutshane.
Inkxaso yokuqala, kwelinye icala, ikwi-130.00, ilandelwa yi-125.00 (nge-30 kaNovemba ephantsi) kwaye okokugqibela yi-129.61. Okwangoku, ukunyuka ukusuka kwi-121.63 kuthathwa njengesigaba sexesha eliphakathi sokukhula ngaphakathi kwendlela yokudibanisa yexesha elide. Logama inqanaba lenkxaso le-127.50 lihlala lingaguqukanga, inzuzo ezinzileyo inokwenzeka.
Okwangoku, ithambeka le-intraday le-EURJPY lihlala lithe tye njengoko lishukuma ukusuka kumgangatho wexeshana we-128.58. Ngokuchasene noko, nokuba kukho ukubuya okukhulu, ukwehla okumandla kunokuqhubeka ngenkxaso ukuba inqanaba lokumelana ne-131.00 lisabambekile.
Ukophula okwethutyana okuphantsi kwe-130.00, okukufutshane nenqanaba lenkxaso ebalulekileyo ye-129.61, kunokuphinda kuqalise ukwehla ukusuka kwi-131.00 ukuya ekubuyeni ukusuka kwi-128.59 ukuya kwi-129.61. Nangona kunjalo, izinga lotshintshiselwano linokuxhaswa ngexesha elifutshane ngumda ongezantsi womgca wokuphakama.